Krizy Nokleary, Sazy & BBC · Global Voices teny Malagasy
Krizy Nokleary, Sazy & BBC
Voadika ny 02 Novambra 2017 15:12 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Janoary taona 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Lasa tantara mafana ao amin'ny fampahalalam-baovao manerantany ny krizy nokleary Iraniana. Bilaogera Iraniana maromaro ao anatiny sy ivelan'i Iran no nizara ny fahatsapan'izy ireo sy ny tahotr'izy ireo momba ny sazy sy ny ady. Mampiseho ny fahadisoam-panantenan'izy ireo amin'ny fampahalalam-baovao iraisampirenena ihany koa izy ireo.
Mehrangize Kar, mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona, mpanoratra sady bilaogera monina ao Etazonia nilaza hoe:
“Amin'ny fepetra misy ankehitriny, tsy manam-paharetana amin'ny ady sy ny fanakanana ny vahoaka Iraniana.” Diso fanantenana izy ireo satria izay heverin'ireo mpitarika Islamika fa fahavalo, dia heverin'izy ireo fa namana, ary izay lazain'ireo mpitarika fa namana, dia heverin'izy ireo fa fahavalo. Mamaritra ny fiarovam-pirenena ho hevitra mifototra amin'ny filaminan'ny faritra, ny mahasoa ara-tsosialy, ny fiarovana ara-toekarena, ny fahalalahana, ny demokrasia, ny fahamendrehan'olombelona, ny rariny sy ny zon'olombelona” ihany koa izy ireo.
Mr.Behi, bilaogera monina ao Iran nanoratra hoe:
“Tena matahotra momba ity olana ara-nokleary ity aho. Tontolo mikorontana izany. Etsy andaniny, ny governemanta Iraniana miaraka amin'ireo politika adala sy mamitaka rehetra momba ny raharaham-bahiny, etsy ankilany, ny matanjaka amin'ny nokleary izay mandrahona antsika hatrany. Iza no eritreretin'izy ireo fa hijaly raha hametraka sazy avy amin'ny Firenena Mikambana ho an'i Iran izy ireo?….. Tena kivy amin'ny media iraisam-pirenena ihany koa aho. Miseho amin'ny lohatenim-baovao lehibe ny fifanolanana momba ny nokleary Iraniana, ary rehefa te hampiseho zavatra momba izany izy ireo, dia mampiseho an'i Ahmadinejad, ny toerana nokleary sasany, sary zanabolana sasany .. Andro vitsy lasa izay, nifandray mivantana tamin'ny solontenany tao Teheran tamin'ny andro iray feno ranomandry ny BBC World . Ny zava-drehetra nasehony momba ny hevitry ny olona dia ny zava-misy rehefa vavaka isaky ny Zoma – izay mivory ara-virtoaly ireo mpomba ny governemanta – ary mihiaka izay nolazain'ny mpitarika hatramin'ny 26 taona lasa. Mihevitra aho fa tena mangatsiaka sy be ranomandry ho an'ny solontenan'ny BBC ny handeha kely ao Teheran ary manontany izay mety hoeritreretin'olon-kafa “.
Hoder, bilaogera monina ao Toronto, miezaka manome vahaolana ao amin'ny bilaoginy. Hoy izy:
“Noho izany, azafady, raha tokony hampiasa ny herinao rehetra amin'ny fampiatoana an'i Iran, ataovy mampanova ny fitondrantenan’ ity fitondrana ity ny herinao rehetra. Tsy azo atao amin'ny alalan'ny fanafihana miaramila na fanonganam-panjakana izany. Ny fanampiana ny olo-tsotra Iraniana tsirairay no ahafahana manao izany mba hahatakatra izy ireo fa azon'izy ireo ovàna ity fitondrana ity raha tian’ izy ireo. Tsy amin'ny alalan'ny revolisiona mahery setra hafa indray, fa amin'ny alalan'ny lavaka kely ihany, na inona na inona antony: ny fifidianana “!
Bilaogera monina ao Iran i NasimeDasht, izay mihevitra fa tsy misy afa-tsy ny fandeferana amin’ izao tontolo izao ihany, indrindra indrindra amin'i Etazonia, afaka mahazo teknolojia nokleary i Iran. Heveriny fa mila mifampiraharaha amin'i Etazonia i Iran mba hamaranana ny fifandirana.
Nijery bilaogy Hezbollah maromaro aho fa tsy nahita zavatra momba ny krizy na sazy nokleary. Fahanginana fotsiny!